Inhlangano ilekelele obefisa ukufunda | News24
Inhlangano ilekelele obefisa ukufunda
INHLANGANO ebizwa ngokuthi Izwi Lothando Home and Community Based Services, okuyinhlangano eyasungulwa ngenhloso yokulekelela imndeni ehlwempu, eholwa uMnuz Phila Zulu, inxusa amalungu omphakathi, osomabhizinisi nezi nhlangano eza hlukahlukene ukuba bayilekelele ngokufeza inhloso yale nhlangano.
UMnuz Zulu uthe le nhlangano isiphinde yakwazi ukulekelela omunye umuntu omusha ohlala eLindelani oneminyaka engu-20.
Uthe inhlangano ilekelele uMnuz Siyathokoza Mweli obefisa ukuqhubeka nokufunda emuva kuka matikuletsheni wakhe awufundela eTshelenkosi Secondary School ngo-2014.
USiyathokoza uthe ngenxa yokungabi nayo imali akakwazanga ukufunda ngonyaka odlule. Uthe omunye wothisha baseTshelenkosi bamuxhumanisa noMnuz Zulu ngoba bazi ukuthi inhlangano yakhe kukhona engakwazi ukumusiza ngakho.
USiyathokoza uthe: “UMnuz Zulu wangithembisa ukuthi uzongilekelela ngokuthi ngithole imali yokubhalisa Ongoye. Ngokuqala kwalonyaka uMnuz Zulu wangiphelezela esikoleni, wafike wangikhulumela khona, ebeka udaba lwami lokuthi anginayo imali yokubhalisa,” kusho yena.
Uqhube wathi emuva kwalokho uMnuz Zulu waphoqeleka ukuthi abuyele KwaDukuza ukuyolandela uSiyathokoza incwadi kuMnyango wezeNhlalakahle eyayidingeka Ongoye.
Uthe: “UMnuz Zulu wathi eseyitholile incwadi wangithumelela yona ngase ngiyihambisa esikoleni, ngasithola kanjalo isikhala Ongoye,” kusho uSiyathokoza.
Uqhube wathi uzokwenza izifundo zomthetho.
USiyathokoza uthe uyambonga kakhulu uMnuz Zulu ngoba wakhipha imali yakhe ngenkathi emuphelezela Ongoye ukuze ezobhalisela ukufunda. Uthe baningi abantu abangasizwa inhlangano kaMnuz Zulu ukube ithola uxhaso.
Uthe: “Izwi Lothando lidinga uxhaso ukuze lizokwazi ukulekelela abantu abafana nami. Le nhlangano isilekelele abantu abaningi ngoba amalungu ayo azimisele ngokulekelela abantu abasha,” kusho uSiyathokoza.